Archive du 20/03/2012
Be no nivadika
Vaky ny sambo. Manavotr�aina tsikelikely mitady izay hiantsampazana ankehitriny ireo mpomba sy nanohana an�i Andry Rajoelina teny amin�ny kianjan�ny 13 mey tamin�ny 2009.	Hamaky ny tohiny...	Politique
CT Randrianasolo Jean Nicolas
Fitiavan-tena no mibahan-toerana amin�ny mpanao politika
Variana mitady tombontsoa fotsiny ny mpanao politika fa tsy mijery ny fahoriana mianjady amin�ny vahoaka.
Tsinontsinoavin�ny FAT ny zaza Malagasy
Tsy laharampahamehana ho an�ny fitondrana tetezamita ny fanabeazana ny zaza Malagasy.
�Efa aty amintsika ny fandresena�
Nizara roa omaly ny mpitolona avy etsy amin�ny Kianjan�ny Finoana Magro Behoririka fa tao ireo andiany nanotrona ireo voampanga tamin�ny raharaha BANI teny amin�ny fitsarana Anosy, ary teo kosa ireo nijanona an-kianja ihany.
Hirotsaka ho filohan�ny CENIT
Rahampitso ny fe-potoana farany fametrahana ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiana ho filohan�ny CENIT.
Nentina tamin�ny seza misy kodiarana
Niaiky fa tena ilaina ny famotsoran-keloka
�Niady isika vao tonga ao anatin�izao fitondrana tetezamita izao. Mila fifamelana isika vao misy ny filaminana takian�ny vondrona iraisam-pirenena sy ny fepetra ilaina amin�ny fifidianana eto amintsika�.
Raharaha BANI 2010
Hanao anjolofo ny FAT
Raikitra ny fitsarana ny raharaha BANI 2010. Natomboka omaly alatsinainy 19 martsa etsy amin�ny fitsarana ambony Anosy izany.
Marc Ravalomanana no vahaolana
Manamafy ny fitakiany amin�ny fiverenan�Atoa Marc Ravalomanana tsy misy fepetra an-tanindrazana sy ny fahafahany hirotsaka ankalalahana amin�ny fifidianana filoham-pirenena ny Vondron'olon-tsotra manohana ny filoha Marc Ravalomanana sy mitaky ny ara-dal�na eto Madagasikara na VOT.
Misaotra ry Jean fa voaraiko indray ny taratasin�ise namaly ny nosoratako tamin�ny farany � !
Niroso amin�ny fitokonana ireo mpampianatra
Efa herinandro vitsivitsy izay no nitokona mitaky ny zony ireo mpampianatra eny anivon�ireo sekolim-panjakana.
Mandrahona an-taratasy ny dahalo
Tsy zakan�ny vahoaka ao amin�ny Kaominina Ambatomifanongoa, Soavina ary Ambondromisotra intsony ny fangalaran�omby sy famonoana olona miseho matetika miaraka amin�ireo fandrahonana ataon�ireo dahalo mpangalatra omby.
Miparitaka ny basy
Misy paikady vaovao hampiasaina
Tsara ary maha te hidera ny fametrahana ilay fomba fiasa sy fomba fiady vaovao mba hanaraha-maso ny fifamezivezen'ny basy eto amintsika.
Mpitandrina Lala Rasendrahasina
Mangataka amin�ny Praiminisitra hamohana ny Radio Fahazavana
Raharaha anisan�ny mbola mitana ny sain�ny maro ny mikasika ny Radio Fahazavana, onjampeon�ny Finagonan�i Jesoa Krsity eto Madagasikara na FJKM.
Lapan�ny fitsarana Anosy
Tsy nipoitra ny CEMGAM
Vavolombelona voalohany tamin�ny raharaha BANI 2010 ny lehiben�ny etamazaoro jeneralin�ny tafika Malagasy, ny jeneraly Ndriarijaona Andr�.
Tsy ho mora ny fanapahan-kevitry ny fitsarana momba ny raharaha BANI, dia iny efa niaraha-nahita omaly iny fa dia hitohy anio indray ny fitsarana.